Khabiiradu ha kuu qoro warqaddaada muddada
Ha la dhammeeyo shaqada guriga
Hayso warqad xilli tacliimeed si xirfadaysan loo qoro. Anaga waxaad naga heleysaa caawimaad deg deg ah khibrad, aqoonyahan qoraaga ah.
Waxaa jira sababo badan oo wanaagsan oo loo qoro warqad xilliyeed u oggolow
Adigu hadda miyaad ku jirtaa marxalad walaac leh oo waxbarashadaada ah? Miyaad ka fikireysaa inaad caawimaad hesho? Waxaad rabtaa tan xigta Shaqada guriga ha qorto, laakiin waxaad ka walwalsan tahay cawaaqibka? Waxaa jira sababo badan oo wanaagsan oo loo helo warqad erey bixin ah haddii habka qoraalkaagu u xumaado.
Waqtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta ayaa cadaadis kugu saaraysa
Xilliga kama dambaysta ah ee soo gudbintaadu waa soo dhowdahay, weli waa inaad wax u barataa imtixaannada jaamacadeed ee soo socda oo aadan garanaynin waxa la sameeyo dhibaatooyinka wakhtiga jira awgood. Dhib malahan!
Caawin xirfadle ah - dhammee shaqada gurigaaga
Anaga waxaad naga heleysaa caawinaad xirfad leh khibrad iyo qoraaga ghostwriter. Mawduuc kasta ha lahaadee! Qorayaashayadu waxay leeyihiin aragti guud oo casri ah oo ku saabsan suugaanta qaybtooda, waxay aad u yaqaanaan eraybixinta la xiriirta waxayna yaqaanaan sida saxda ah ee loo adeegsado habab gaar ah oo maaddo ah si aad si guul leh ugu dhammaystirto xilligaaga.
Iyada oo kooxdeena ay garab taagan tahay, waxaad wax u baran kartaa imtixaannada soo socda oo mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho taada warqad erey cilmiyeed samee! Waxaan daryeeleynaa wax walba: laga bilaabo qorista qoraalka illaa buug-gacmeedka. Kuweena xirfadle qoraaga ah ku soo qaad dunta guud hawsha gurigaaga - iyo heerka ugu sarreeya.
Dhinaca kale, miyaad ku dhibsanaysaa kuwa sarreeya Waqtiga cadaadiska daraasadahaDhinaca kale, miyaad dareentaa dambi markaad ka fikirto inaad shaqaaleyso qoraaga beenta ah?
Runtii arday kasta wuxuu leeyahay wajiyo walaac leh oo waxbarashadooda ah waxaana ku adkaaday dhowr shaqo isla waqtigaas. Haddii markaa ay jiraan dhibaatooyin shaqsiyadeed iyo kirada qolka oo aad u yar oo ku yaal guri la wadaago waxaa lagu bixin karaa oo keliya caawimaadda shaqada baarka, taas oo kaa xanibaysa hurdo habeennimo, markaa waa waqtigii la heli lahaa caawimaad.
Ku tababbarida waraaqaha waraaqaha: Diyaargarowga ugu fiican ee muddada warqadda
Waraaqaha ayaa xitaa ku siin kara xirmo daryeel la'aan ah oo dhan iyo taada shaqada guriga oo dhammaystiran qor. Khudbadda waa inaad mowduuca wax ka qabataa, laakiin waad naga ballansan kartaa tababar dhammaystiran.
Wir haben khubaro dhammaan maadooyinka kooxda, si aad nooga hesho caawimaad mowduuc kasta ah.
Shaqo-guri Ka-Akhrinta waraaqaha!
Miyaad ka fikireysaa cudurdaar, hoos u dhigista, tirinta iyo buugaagta?
Waxaa laga yaabaa in lagaa caawiyo cilmi baarista suugaanta ee waqtiga qaadata ayaa kugu filan, ama waxaad u baahan tahay qof horey u qoray kanaga Shaqada guriga Akhrinta, hagaajinta iyo gelinta taabashada dhamaadka fasalka ugu sareeya? Qeybahan shaqada sidoo kale waxaa la wareegay waraaqo xaashi ah. Badanaa ardaydu muhiimad weyn kuma saaraan akhrinta oo daaha ka qaadi lahayd khaladaad yaryar oo badan. Taasi waa sababta aan kaliya u bixinaynin adeegga qorista caadiga ah, laakiin sidoo kale hubinta tayada natiijada dib-u-eegista awgeed. Waxaad had iyo jeer la socotaa shaqadaada adoo macluumaadkaaga si joogto ah ugu dhaafsanaya qoraagaaga taleefan ama emayl. Ku dhowaad sida inaad lashaqeysid ardaydaada kale. Gaar ahaan, khaladaadka yaryar, sida raad-raacyada maqan ama tirsiga, lama ilaawin. Buug-gacmeedkaaga sidoo kale waa la hubin doonaa si xirfadaysan oo dib loo eegi doonaa haddii loo baahdo.
Ein Ghostwriter Waxay kaa yareyn kartaa shaqooyin badan, laakiin wali waa inaad naftaada wax barataa.Sidoo kale arday badan ayaa sidoo kale adeegsada adeegeena si loo hubiyo in waxyaabaha ku jira ay sax yihiin, shey si fiican loo tijaabiyay oo loogu talagalay shaqada gurigaaga ka dib ku waafaji qaabka qoraalkaaga.
Ardaydu waxay jecelyihiin inay dib ugu dhacaan caawimada waraaqaha iyo qoraalka. Waxaan ku qancineynaa aqoon iyo waayo aragnimo hadii kale laga yaabo inuu heli karo borofisarkaaga oo kaliya. Maaddaama aad tahay adeeg aqoon qoraal ah oo ghost, waxaad naga heli doontaa shaqo-guri oo sharci ah annaga, iyada oo aan wax cawaaqib ah ka dhalan.
"Papernerds waxaan ugu dambeyn ku maamuli karaa waajibaadkeyga! Mahadsanid."
Bachelor-ka cilmiga bulshada
Xilliga kama dambaysta ah ee soo gudbintaadu waa soo dhowdahay, weli waa inaad wax u barataa imtixaannada jaamacadeed ee soo socda oo aadan garanaynin waxa la sameeyo dhibaatooyinka wakhtiga jira awgood. Dhib malahan! Annaga waxaad naga heleysaa caawimaad xirfad leh khibrad iyo karti Ghostwriter, iyada oo aan loo eegin mawduuca! Qorayaashayaga ghostwriters waxay leeyihiin dulmar guud oo casri ah oo ku saabsan suugaanta qaybtooda, waxay aad u yaqaanaan eraybixinta laxiriira waxayna yaqaanaan sida loo isticmaalo hababka maadooyinka gaarka u ah si sax ah si loo hagaajiyo Shaqada guriga si guul leh loo dhammaystiro Iyada oo kooxdeena ay garab taagan tahay, waad wax u baran kartaa imtixaannada soo socda oo mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho shaqadaada saynis Shaqada guriga dhigi!
Su'aalaha ku saabsan shaqada guriga iyo waxa muhiimka ah haddii aad leedahay iyaga oo qoran
Sidee qaali u tahay in muddo la qoro?
95% tayada shaqada gurigaaga waxaa go'aaminaya qoraagaaga. Aqoonyahankan ayaa u baahan in si macquul ah loo bixiyo oo waqti ku filan la siiyo. Warqad erey bixin ah ayaa la siiyaa ardayga bilowga simistarka waana inay caadi ahaan ku qaadataa 2 bilood inuu ku qoro warqaddan. Aqoonyahan tababaran ayaa tan sameyn doona 2-3 toddobaad.
Waad jihaysan kartaa adiga oo raacaya waxa aad hadhow kasban doonto. Waxay kuxirantahay waqtiga, qoraaga waxaa la siin doonaa lacag u dhiganta waqtiga la isticmaalay.
Qoraalka ghost ma sharci baa?
Qoraalka cirfiidka tacliinta wuxuu ku saleysan yahay xaalada sharci ee jirta aan si cad loo xakamayn.
Maxkamadda Sare ee Frankfurt (Az: 11 U 51/08) waxay xukuntay 2009-kii in heshiis dhexmaray ghostwriter iyo macmiilka oo ku saabsan xuquuqda lahaanshaha aan la diidi karin. Qoraal-gacmeedku waa adeeg. Ku Samee soo bandhigida, waraaqaha waraaqaha sayniska, daraasadaha hordhaca ah iwm sidaas gabi ahaanba sharci.
Si aad uga mid noqoto bog sharci ah oo ammaan ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad haysato midka uu abuuray ghostwriter U qor qoraal ahaan oo ku dar qaababkaaga. Adiga oo isbedel sameynaya, waa wax iska cad shaqadaada aad abuurtay.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la qoro warqad xilliyeed?
Baaxadda, mawduuca, culeyska shaqada, hawsha iyo shuruudaha tayada ayaa go'aaminaya waqtiga howsha ay tahay in la isticmaalo. Xuduudahaas waxaa qeexaya borofisar, kaas oo inta badan ardayda siiya mowduucyada bilowga simistarka.
Ardaygu markaa wuxuu heystaa qiyaastii 2-3 bilood inuu qoro warqadda ereyga. Aqoonyahan tababaran waa inuu ku jiraa qiyaastii 1 bil abuur Si kastaba ha noqotee, kor ku xusan waa Halbeegyada waa go'aan waqtiga hawsha.
Waraaqaha waraaqaha ah kuma siinayaan oo keliya waax tayo leh oo lagu kalsoonaan karo muddadaada warqad, buuga tacliinta sare ama shahaadada mastarka, laakiin sidoo kale tifaftire khibrad leh oo leh adeeg qorid heer sare ah.
Ma jiro xatooyo - kaliya waxyaabaha gaarka ah.
Waxaan ku farxi doonnaa inaan ka jawaabno dhammaan su'aalahaaga xitaa ka hor intaanan dalban amarkaaga.
U qalmida tacliinta
Tifaftirayaashayadu waa aqoonyahano aqoonyahano aqoon iyo macalimiin shahaado haysta oo khibrad sanooyin badan u leh shaqada sayniska.
Waxaad had iyo jeer laxiriirtaa kooxdeena taageerada heersare ah. Adeegga macmiilku aad buu muhiim ugu yahay Warqadaha.
Macaamil aamin ah
Waad ku kalsoonaan kartaa shaqada sayniska ee Papernerds. Waxaan u haynaa tilmaamo adag oo tayo leh qorayaashayada. Xatooyo malahan, cawaaqib xumo malahan.
Luuqadaha oo dhan
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo shaqada luqadda qalaad? Dhib malahan! Kooxdayada khibrada leh waxay ku farxi doonaan inay kugula taliyaan meelahayada takhasuska leh iyo luqadaha.
Kalsoonidu aad ayey muhiim ugu tahay waraaqaha. Marka lagu daro isgaarsiinta qarsoodiga ah iyo qarsoodiga ah, waxaan si adag ugu hogaansanahay ilaalinta xogta.
Shaqo kasta oo cilmiyaysan waxaa dib u aqrinaya akadeemiyaadka labaad ee la shaqeynta qoraaga. Barnaamijka xatooyada ayaa hubiya waxyaabaha gaarka u ah.